सिटीई भीटीले TSLC बिषय पढाउने क्याम्पसको नबिकरण रोक्यो !१५ महिने कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि खारेज ! – Public Health Concern(PHC)
सिटीई भीटीले TSLC बिषय पढाउने क्याम्पसको नबिकरण रोक्यो !१५ महिने कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि खारेज !
काठमाडौं – प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले १५ महिने टिएसएलसी कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि खारेज गरेको छ। यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी सिटिइभिटीले टिएसएलसी सञ्चालन गर्ने प्राविधिक शिक्षालयहरुको नवीकरणमा रोक लगाएको छ।
सदस्य सचिव देश बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँ एकदुई दिनमा नेपाल आइपुग्नु भएपछि छलफल गरी निकास निकाल्नु पर्छ।’ उनले थपे, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समेत छलफल गरी परिषद्ले उचित निकास निकाल्ने छ।’ श्रोत
Tags: CTEVT Nepalhealth infokharejipublic health updateTSLC Programme
खोप के हो? यसले कसरी काम गर्छ? किन मानिस डराउँछन्?